काम, आम्दानी ठप्प । कहिलेसम्म यस्तो हो अनिश्चित । बचत सकिँदै । सापटी, पैचो दिनेहरु पनि कम । सरकारी राहत करिब असम्भव । चारैतिर निराशा । यस्तै मनोदशामा बाचिरहेका छन् अधिकांश नेपाली । सकल भूमण्डलमै मानव नियति यस्तै देखिएको छ । अनेक महामारी र हजारौं युद्ध विभिषिका व्यहोरेको मानव सभ्यतामाथि नै कोरोनाले प्रश्न उठाएको छ । हामीले आधुनिक र सभ्य दाबी गरेको जीवनयापन वास्तवमै त्यस्तो थियो त ? प्राकृतिक रुपमै… पुरा पढौ
सरकार अभिभावक बनोस्, विदेशमा कोही रुँदै नमरोस्
२०७६ जेठ ६ गते, आज लकडाउनको ५६ औं दिन । नेपालीहरु घर, डेराभित्र थन्किएको पनि यतिका दिन बित्यो । लकडाउनको सुरुमा सङ्क्रमण बढेको थिएन । अहिले आएर कोरोनाका कारण नेपालमै मान्छे मर्न थालिसके । तीन सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसके । विस्तारै हाम्रो देशमा कोरोना महामारीका रूपमा फैलने सङ्केतहरू देखिएका छन् । अब केही महिना हामी सबैका लागि निकै चुनौतीको समय हुनेछ । हामी र हाम्रो सरकार कहाँनेर चुक्यौं ? कसरी… पुरा पढौ
सम्पादकीय : नयाँ जंगबहादुरको विपक्षमा
सोमबार अनौठो परिदृश्य देखियो । मन्त्रीपरिषद्बाट एकाएक २ अध्यादेश पारित भए, साँझ दुवै अध्यादेश जारी भए । विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाएको कोरोना कहरका कारण देश लकडाउनमा भएका बेला सरकारको प्राथमिकता कोरोनाबाट मुक्ति कि व्यक्ति स्वार्थ ? अहिले संसदमा नेकपासँग करिब २ तिहाइ छ, यस्तो बेलामा अध्यादेशबाट कानुन संशोधनको औचित्य के ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी काम गरेका छन् । उनी जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री… पुरा पढौ
बास्कोटालाई बर्खास्त गर
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा विवादमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमै बस्ने बास्कोटा निसन्देह ओलीका विश्वासपात्र हुन् । उनले सेक्युरिटी प्रेस किन्ने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कमिसनको डिलिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । यसअघिका उनका सार्वजनिक गतिविधि पनि सरकारका प्रवक्तालाई सुहाउने खालका थिएनन् । विपक्षी, सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र अन्य पक्षलाई अनेक लाञ्क्षना लगाउने र हियाएर बोल्ने बास्कोटाले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । धुलिखेलमा… पुरा पढौ
जहाँ बाँकी छन् जनयुद्धका छर्राहरु
पञ्चायती व्यवस्था ढलेकै आधा दशकमा फेरि अर्काे क्रान्तिको बिउँ रोपियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि राखेर आएको छिपछिपे प्रजातन्त्रमा नेपाली विश्व बुझ्दै थिए, सचेत बन्दै थिए । आफैंलाई चिन्दै थिए, शोषणको कारण पर्गेल्दै थिए । यही परिवेशमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु ग¥यो । २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको जनयुद्धलाई आरम्भमा राज्यले मट्याङ्ग्रा खेल जस्तै ठान्यो । वेवास्ता ग¥यो । जनयुद्ध सुरु गरेपछि माओवादी संगठन निर्माण, सेना निर्माण, आधार… पुरा पढौ
नेपालीहरूको दोश्रो ठूलो पर्व तिहार घरदैलोमा आइसक्यो । शास्त्रीय परम्परा अनुसार यमपञ्चक शुरु भएपछि तिहार शुरु भएको मानिन्छ । तिहारका ५ दिनमध्ये पहिलो दिन काग तिहार, दोश्रो दिन कुकुर तिहार, तेश्रो दिन लक्ष्मी पूजा अर्थात् गाई तिहार, चौथो दिन गोर्वधन पूजा अर्थात गोरु तिहार र अन्तिम दिन भाइटीका लगाएपछि विधिवत् रुपमा तिहार सकिन्छ । तिहारमा द्यौसीभैली खेलेर रमाईलो पनि गरिन्छ । मधेशी समुदायले लक्ष्मीपूजाका दिन दीपावली गरेर धूमधामसँग मनाउँछन् ।… पुरा पढौ
असोज ३ लाई कालो दिवस भन्नु जनताको अपमान
आज असोज ३ गते, ऐतिहासिक दिन । जुन दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो । जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने प्रावधानसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको संविधान जारी भएको आज पाचौं वसन्त प्रवेश भएको छ । नेपाली जनताको ६० वर्षको सपना साकार पार्दै यसै संविधानसभाले संविधान बनाएको थियो । यो नेपाल र नेपालीका लागि निकै खुशी र हर्षको दिन हो । भलै केही राजनीतिक दलले यसलाई कालो… पुरा पढौ
सम्पादकीय : डेंगुको डर कहिलेसम्म ?
यति बेला नेपाल डेंगु रोगको चपेटामा परेको छ । अघिल्लो वर्ष पोखरामा पनि देखिएको डेंगु रोग अहिले देशका धेरै जिल्लामा फैलिएको छ । यही रोगका कारणले एक मन्त्रीसमेत बिरामी परे । पोखरामा मात्रै १ हजार बढी बिरामी फेला परेका छन् । यसकै कारण ७ जनाको निधन भइसकेको छ । यो रोग नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । विगतमा डेंगु देखिए पनि १ महिनाभित्र हराउने गरेकोमा अहिले भने ४ महिनासम्म… पुरा पढौ
तीज : सम्बन्धको सेतु
आज हिन्दू महिलाले हर्ष उल्लासपूर्णरुपमा मनाउँदै आएको तीज पर्व हो । तीजमा खासगरी श्रीमान्को दीर्घायु एवं आफ्नो अटल सौभाग्यको मनोकामनाका साथ ब्रत बस्ने र अविवाहित युवतीहरू असल जीवनसाथीको मनोकामना राखेर ब्रत बस्ने, पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ । तीजको अघिल्लो दिन सम्भव हुनेहरू माइतीमा जम्मा भएर मीठो मसिनो खाने सम्भव नहुने दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर दर खाएर तीजको स्वागत गर्ने परम्परा निकै लोकप्रिय छ । तीजको सांस्कृतिक पक्षले के… पुरा पढौ
आज गुरुपूर्णिमा अर्थात आषाढशुक्ल पूर्णिमा हो । व्यास ऋषिलाई गुरुजनका प्रतीकका रुपमा मान्ने गरिएको छ । पराशरका पुत्र कृष्ण दैपायन व्यास ऋषिको जन्मदिन अर्थात आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई नै गुरु पूर्णिमााका रुपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । आजका दिन आफूलाई शिक्षादीक्षा दिने गुरुलाई आदार–सत्कार स्वरुप मानिने पुजिने र मीठामीठा खानेकुरा दिएर मनाउने गरिएको छ । भारतमा त कतिपय शिक्षकले त गुरुपूर्णिमालाई नै व्यास पूर्णिमा मानी यसै दिनदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्र शुभारम्भ… पुरा पढौ